Prosurge - ဒီရေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အများဆုံးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး | | ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Device ကိုဒီရေလှိုင်း SPD
မူပိုင်ခွင့် & လက်မှတ်
Lab မှ & စမ်းသပ်ခြင်း
ul 1449 လက်မှတ်ရ SPD
panel ကို SPD
ဝင်း-လျော့နည်း Panel ကို SPD
AC အဘို့အ Din-ရထားလမ်း SPD
DC က / PV များအတွက် Din-ရထားလမ်း SPD
Panel ကိုအမျိုးအစား Filter ကိုဒီရေလှိုင်း
LED Lighting များအတွက် SPD
Ethernet ဟာအဘို့အ SPD
ဒီရေလှိုင်း & Lightning ကောင်တာ
ဒီရေလှိုင်း & Lightning Monitor & တိုင်းတာခြင်း
Oil & Gas Station ကို
LED Display ကို
Home prosurge 2018-09-12T15:06:51+00:00
အတိတ် 12 နှစ်ပေါင်းအဘို့, Prosurge တစ်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြင့်တက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကစားသမားနှင့် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများနှင့်လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ရေရှည်မိတ်ဖက်တစ်ဦးနှိမ့်ချက start-up, ကနေသူ့ဟာသူအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ SPD6နိုင်ငံများထက် 60 တိုက်ကြီးနှင့်ပိုပြီးအတွက်အမျိုးမျိုးသောဝေဖန်အဖွဲ့အစည်းများကာကွယ်နေကြပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် Prosurge Choose
Prosurge ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ R & D အဖွဲ့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု, အတွေ့အကြုံနှင့်အပျနှံကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှု၏လောင်စာဖြစ်ပါတယ်။
in-အိမ်သူအိမ်သား Lab က
ကျွန်ုပ်တို့၏ In-အိမ်သူအိမ်သားဓာတ်ခွဲခန်းနှစ်ခုလုံး IEC61643-11 နှင့် UL1449 စံနှင့်အညီစမ်းသပ်ဖျော်ဖြေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ ISO9001 ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြပြီးဘားကုဒ်ခြေရာခံခြင်းစနစ်နှင့်6Sigma အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
Prosurge လမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ SPDs များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းပျမ်းမျှအားအထက်အာမခံအချိန်ပေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့စိတ်ချလက်ချ 10 နှစ် 20 နှစ်ပေါင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အချို့အဘို့အပင်ဘဝအချိန်အာမခံကမ်းလှမ်းနေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားမှုများမှကာကွယ်လျက်ရှိသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SPDs တကမ္ဘာလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
သူတို့ကမ္ဘာပေါ်မှာနေရာတိုင်းတွင်ရောင်းချနိုင်အောင် Prosurge ရဲ့ SPD ul, ETL, KEMA, TUV, အီးအားဖြင့် Insight web studio ၏အသိအမှတ်ပြုကြသည်။
အပူ Protected MOV
AC အ Din-ရထားလမ်း SPD
DC က Din-ရထားလမ်း SPD
ul 1449 Panel ကို SPD
LED မီးအလင်းရောင်များအတွက် SPD
လက်မှတ်များ & မူပိုင်ခွင့်
Prosurge ရဲ့ SPDs တကမ္ဘာလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံး rigourous စံချိန်စံညွှန်းများကမူပိုင်ခွင့်များနှင့်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။
Prosurge ကျွန်တော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောအကောင်းဆုံးကိုကုမ္ပဏီတွေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Prosurge ပေးထုတ်ကုန်အနုပညာ၏ပြည်နယ်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အလွန်အရေးကြီးသောအရာ ul အဖြစ်လိုအပ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီခွင့်ပြုချက်အပေါငျးတို့သသယ်ဆောင်ဖြစ်ကြသည်။
Howard Minnic, အလိုအလျောက် Systems Interconnection, Inc မှ
အဆိုပါထုတ်ကုန်ကြောင့်ငါ Prosurge မြင့်မားသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာနှင့်စက်ရုံဝန်ထမ်းများနှင့်အတူမြင့်မားစံကုမ္ပဏီကြောင်းပြောနိုင်မျက်မှောက်အပေါ်တစ်ဦးပျက်ကွက်ခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. အားလုံးမေးခွန်းများကိုဒီတော့လွယ်လွယ်ကူကူရှင်းပြပြီးလျင်မြန်စွာကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကြသည်အထိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Prosurge နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်အလွယ်တကူပြုမိသည်။
စယ် Pereira, AK ပါဝါ Solutions
ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံ Prosurge အီလက်ထရောနစ်လိုအပ်သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မဆိုအဆင့်အထိမြင့်တက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးထုတ်ကုန်များအများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်မှ ... ကမ္ဘာကြီးကျယ်ပြန့်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့မြင့်တက်ဒီဇိုင်းများ၏ parameters တွေကိုအတည်ပြုဖို့စမ်းသပ်မှုကိရိယာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ၏အပြည့်အဝစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အလွန်အနည်းငယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် နှင့်ထုတ်ကုန်။
အယ်လ်ဖွန်ဆို Najera, အီလက်ထရောနစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အာရှ
ကျနော်တို့ Prosurge ၏ထုတ်ကုန်တင်သွင်းမှုနှင့် 2011 ကတည်းကကိုရီးယားဖောက်သည်သူတို့ကိုထောက်ပံ့နေကြသည်။ Prosurge အမြဲထုတ်ကုန်အကွာအဝေး, အရည်အသွေး, ဝန်ဆောင်မှု R & D ကိုနှင့်အင်ဂျင်နီယာထောက်ခံမှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဝမ်းမြောက်စွာအခြားအသုံးပြုသူများမှ Prosurge အကြံပြုပါသည်။
Joo-Sool Jeon, Surgefree ကော်ပိုရေးရှင်း
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Solutions ဒီရေလှိုင်း
Prosurge Phlippines ၌အခြားသောသစ်ကိုမြင့်တက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်းအားရှိပါတယ်။ အဆိုပါ SPDs ကြောင်း [ ... ] သ DC က charger ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ installed နေကြတယ်
Prosurge စက်တင်ဘာလအတွင်းလျှပ်စစ် & Power ကဗီယက်နမ် 2018 တက်ရောက်တော်မူမည်
Prosurge စက်တင်ဘာလအတွင်းလျှပ်စစ် & Power ကဗီယက်နမ် 2018 တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်အပျက်စဉ်အတွင်း Prosurge [ ... ] သ updated တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
Prosurge စင်္ကာပူအသစ်မြင့်တက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်းကိုရှိပါတယ်: 1) Prosurge SP320 / 4P ထဲမှာတပ်ဆင်ထားသည် [ ... ]
Prosurge ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်2နာရီအတွက်စာပြန်ရန်ရယူပါ!
အဆိုပါ Contact Form ဖြည့်ပါနှင့်2နာရီအတွက်စာပြန်ရန် Get
+ 86 186 765 28175 (မိုဘိုင်း / WhatsApp ကို / WeChat / Skype ကို)
အရေးပေါ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဘို့, ဘီလ် Goldbach + 1 727 488 9544 ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
OEM / SKD များအတွက် PCB ညီလာခံ
AC / DC များအတွက် Din-ရထားလမ်း SPD
1 /2Panel ကို SPD ရိုက်ပါ
မူပိုင် 2006 - 2018 | Prosurge, Inc မှ | 5560 58th st မြောက်အမေရိက, Kenneth စီးတီး, ဖလော်ရီဒါ 33709-2038, ယူနိုက်တက်စတိတ် | Prosurge အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှ | Dajin စက်မှုဇုံ, Foshan 52800, တရုတ် | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး